Yini i-brinicle futhi yakhiwa kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma kwenzeka uthola ithuba lokuya endaweni ebanda njengezwekazi lase-Antarctic, futhi uma ulokotha ungene emanzini, qaphela kakhulu. Kungenzeka uhlangane neziphepho zasolwandle, ezaziwa ngegama lika umphetho, noma ingalo yokufa.
Kungumbukiso omangalisayo wemvelo, mhlawumbe okumangalisa kakhulu kunakho konke okwenzeka olwandle. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi lakhiwa kanjani?
Kwiplanethi yoMhlaba, konke akukatholakali, futhi empeleni, bekungekho kuze kube ngo-1960 lapho kwakwaziwa ukuthi i-brinicle ikhona ngempela, futhi ngo-2011 yaqoshwa okokuqala ngqa ngesikhathi. Kodwa kuyini? Yebo, lesi simanga sokufuna ukwazi empeleni yi-ice stalactite eyakha emanzini ase-Antarctica ngenxa yomehluko wamazinga okushisa womabili ebusweni (okungamazungeza -20ºC) nasekujuleni (kusuka - (2 ° C). Ngakho-ke ukugeleza kwamanzi anosawoti, okushisa kwawo kungamazinga amancane ngaphansi kuka-zero, kuhlangana namanzi olwandle, afudumele, futhi ngaleyo ndlela kwakheke i-ice stalactite.
Ekuqaleni kukhumbuza kakhulu ishubhu elingenalutho leqhwa elikhula liye phansi. Ngaphakathi kuwo, kukhona amanzi okuyi kubanda ngokweqile nokuthi inenqwaba kasawoti, oqoqeka eziteshini. Kulesi sigaba ukwakheka okuntekenteke, ngoba izindonga zincane futhi kudingeka ukuthi "zondle" usawoti ukuze uqhubeke ukhula. Kodwa-ke, ukuze lokhu kwenzeke, imibandela kumele ibe yile elandelayo:
Amanzi azungeze ishubhu kufanele abe kancane usawoti omncane kunaleyo engaphakathi kuyo.
Amanzi ngeke kujule kakhulu.
Amanzi asendaweni kufanele agcinwe ukuzola.
Uma izimo zilungile, ungangena ezansi uhambe ibanga elide ekwehleni. Okwamanje, izoshiya iwebhu yeqhwa ezokwenza lokho ekwenzayo kangcono kakhulu: iqhwa yonke into esendleleni yayo, kungaba izinkanyezi noma ama-urchins olwandle, inhlanzi, izinkalankala ... noma yini. Ngaphandle kwalokho, kalula izobuna.
Ngaphezu kwalokho, "ingalo" ibanda kakhulu futhi iminyene kangangokuthi njengoba iqhubekela phambili ayilahli uzinzo, ngakho-ke igcina ukwakheka kwayo futhi inyuka ngosayizi lapho ingena olwandle, njengoba inengqimba yokuvikela okwakhiwa indiza amanzi abandayo anosawoti egeleza phansi. Lolu ungqimba luyivimbela ekushiseni, ngakho-ke luzoqhubeka ukwehla futhi ludale iqhwa eliningi. Lokhu kungenxa yokuthi usawoti ubangela ukuthi iphuzu lokuqandisa lehle… okuningi. Ngakho-ke, i-brinicle iyaqina, iyamangaza uma kungenzeka.
Iqiniso ngukuthi usawoti, ngenkathi i-brinicle iqhubeka iba yiqhwa, iphuma ekubunjweni okushiwo, okwenza amanzi aseduze abe nosawoti omningi. Kungashiwo, futhi ngeke senze iphutha, ukuthi le nto "iphakela" usawoti, ngakho-ke kaninginingi umjikelezo uzoqala kabusha ... kuze kube nezinguquko ezinkulu emazingeni okushisa noma ekujuleni kolwandle.
Usayizi brinicle kuyinto kunqunyelwe. Kuzoncika emanzini ayizungezile, ekujuleni kwamanzi, kanye nasekukhuleni kweqhwa omunye anakho. Kunoma ikuphi, kuyamangalisa.
Lokhu kwakhiwa kwaqoshwa okokuqala ngqa ngo-2011, eRazorback Island, e-Antarctica, nguKathryn Jeffs namakhamera uHugh Miller noDoug Anderson be-BBC. Izinga lokushisa lolwandle lalizungeze -2ºC, kepha babenesibindi sokuntywila ngezingubo ezifanele, futhi isibindi sabo ngokungangabazeki savuzwa ngamandla. irekhodi esinye sezimo zemvelo ezingakholeki esibonwe eMhlabeni, ikakhulukazi olwandle oluyiqhwa lwendawo ehlaba umxhwele njenge-Antarctica.
Ngakho-ke, ngaphansi kwendawo embozwe yiqhwa lapho amabhere asezindaweni eziphakeme, amabhubesi asolwandle, ama-penguin nezinye izilwane enza umsebenzi wawo wansuku zonke efuna okuthile angakudla, izindiza zamanzi ezineqhwa zihlangana nolwandle okuthi uma kuhle kubanda kakhulu, kushisa ngokwanele ukuba kwakheke okuthiwa yizishingishane zasolwandle, waziwa kangcono ngegama le-brinicle noma umunwe wokufa.
Kuningi esisazokufunda emvelweni, futhi kungenzeka ukuthi kusenokusimangaza okungaphezu kokukodwa okusigcinele kona. Akwaziwa ukuthi umuntu uzophinde awubone nini umbukiso onjengalona, ​​okwaziwayo ukuthi lapho enza, izomangala futhi.
Ucabangani? Kuyathakazelisa, akunjalo? I-brinicle ithuthuka ngokushesha, ihudula konke okutholayo nayo. Ngakho-ke uma kwenzeka uthola ithuba lokuyibona eduze, kujabulele… kepha ukude, uma kungenzeka.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » I-brinicle noma umunwe wokufa, isiphepho solwandle
KUBALULEKILE UKUJULA NGOKUGCWELE KULESI SIHLOKO SIYABONGA NGAKHO KONKE